कोरिया बाट एक युवा लेख्छन ,एक दिन तिमिहरुलाई पनि जनताले त्यहि बांधहरुमा पुर्नेछन् :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
कोरिया बाट एक युवा लेख्छन ,एक दिन तिमिहरुलाई पनि जनताले त्यहि बांधहरुमा पुर्नेछन्
मिन बिक ,दक्षिण कोरिया
अत्याधिक बर्षाको कारण देशको आधा भु-भाग जलमग्न भएको छ । धनजनको अत्याधिक क्षति भएको छ । यी तस्बिरहरुले मन भाब बिह्वल बनाएको छ भने प्रत्यक्ष भोग्नेहरुको पीडा कस्तो होला? समाचार हरु पढ्दैछु सुत्केरी महिलाको बाढिको कारण बाटोमै मृत्युु,बाढिमा परि अहिले सम्म ६०जनाको मृत्यु सयौं बेपत्ता,जमिनको अभावमा मृतक बालक बाढिमै बगाईयो,चारैतिर उर्लदो बाढी बिचमा रहेको हल्का अग्लो ढिस्कोमा खुट्टा मात्रै थमाएर बसेका २०/२५जना मृत्युको क्षण कुरिरहेको /जलमग्न टेक्ने ठाउँ कह अत्तोपत्तो नहुने ठाउँमा टाउको माथी कलिला अबोध बालक हालेर गन्तव्य बिहिन यात्रा गर्दै गरेको एस्तो दर्दनाक स्थिती मेरो देशले कहिले सम्म ब्यहोर्नुपर्ने ? देशको ठेक्का लिएका दलालहरुको झिनो ब्यक्तिगत स्वार्थका खातिर देशको सार्बभौम सत्ता प्रती बलात्कार गर्दै गरिएका सम्झौताले आज निर्दोष जनता हरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु र ठूलो भौतिक संरचना पानीमा बिलिन गराउन पुग्दैछन। प्रत्यक बर्ष बर्षायाममा गरिएको कृत्रिम डुबानले प्रत्यक बर्ष एस्तो दर्दनाक पीडा भोगिरहने जनताले कहिले पाउला त देशको सच्चा माया गर्ने र यो सम्झौताहरु खारेजी गर्ने एक निडर गोर्खाली ?
बिगतमा गरिएका राष्ट्रहित बिपरित का सम्झौताबाट पाठ सिक्दै नयाँ सम्झौता हरु गरिनु पर्नेमा यहाँ त खुलेआम कसले के सुम्पिने भन्ने होडबाजी जस्तो गरिरहेछन ।त्यसको ज्वलन्त उदाहरणमा कोशी सम्झौता का कमजोरी हरु केलाएर अन्य सम्झौता गरिनुपर्थ्यो तर सबै सम्झौता अध्ययन नगरी प्रस्ताब लाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेर बस्छन हाम्रा उच्च नेतागणहरु। पछिल्लो सम्झौतामा कर्णाली सम्झौता महाकाली सम्झौता पश्चिम सेती सम्झौता यसका गतिला उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यिनिहरुको सुम्पिने होडबाजी भन्नुमा कुनै अनर्थ पक्कै लाग्ने छैन।
यहाँ हामी छिमेकी खराब छ, उ साच्चिकै गलत छ, उसको रबैया चल्न दिनु हुदैन बन्द गरिनुपर्छ भनिरहदा हामिले यो कुरा गल्ती पटक्कै गरेका छैनौं । गल्ती त तिनिहरुले गरेका हुन जसले घरको ताला चाबी सुम्पिन तछाड मछाड गरे । पहिला आफ्नो थैलिको मुख राम्रोसँग बाध्नुभयो भने दोष कसैलाई लगाउनै पर्दैन बुढापाकाले त्यसै भनेका होइनन। ताला चाबी तोड्नु भनेको नेपालिले फलामको चिउरा चपाउनु सरह जस्तै बनाईसकेका छन । अझै पनि हामी नेपाल सार्बभौमसत्ता सम्म्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर गलत समिक्षा गर्दै समय खेर फालिरहेका त छैनौं?? सोच्ने बेला आएको छ । जसले जे भनोस तर्क तर्क नै हो उ आफ्नो ठाउमा ठिल हुन सक्ला तर बेला बेलामा बिशिस्ट ब्यक्तिहरुका मुखारबिन्दुबाट निस्कने शब्दहरुले हाम्रो देश नेपाल स्वतन्त्र छैन यो त अर्ध-उपनिबेशमा छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । भुतपुर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुरामले खुलम खुल्ला रुपमा देशको नाम मात्रै नेपाल हो ताला चाबी त बाहिरै छ भनेर स्पष्ट भनिसकेका छन। र यस्को बिरोधमा पनि नेपालकै बिशिस्टहरुको जमात ठूलो थियो त्यो बेला । यिनी स्पष्ट बोलेकै हुन एकपटक प्रधानमन्त्री भएको ब्यक्तिलाई पक्कै पनि गुदि फेला पारेको हुनुपर्छ । र मलाई पनि यस्तो लाग्छ कि हामी यस्तो स्वतन्त्र घरमा बस्छौ जसको ताला चाबी पराइको हातमा छ ।
हामी नेपालिलाई हरेक बर्ष पर्ने यो बिपत्ति प्राकृतिक कम र बढी कृत्रिम हो भन्ने सबै नेपाली हरुलाई थाहा नै छ । यहाँ कृत्रिम रुपमा बिपत्ति जन्माएर अनाहकमा निर्दोष नेपालिहरु बर्षेनी त्रासमा जीवन ब्यतित गर्न परिरहेको छ यसको मुख्य भागिदार नेपाली नेताहरु हुनुपर्नेमा यहाँ गलत हौवा फैलाउन सक्रिय भएका कारण असल चरित्र पछाडि रहेको छ ।हामि बिरहरुको देश भबेर इतिहासमा लेखिएको छ वा बिस्वले त्यस्तै पढिरहेको छ भन्ने मैले पनि पढेको हो । बिस्वकै क्रूर शाशक हिटलर पनि भन्थ्यो रे म सङ्ग गोर्खाली सेना भएको भए विश्व मेरो कब्जामा राख्न सक्थे भाएर । तर होइन रहेछ कि भन्ने लागिरहेछ ।आज नेपाली भुमिमा भारतिय अतिवादका बिरुद्द उभिने हिम्मत कसले देखायो ?आज नेपाली भुमी डुबानमा पर्दा कुन गोर्खालिले शाहस गर्यो ? खोइ त कुन गोर्खाली जन्म्यो र यस्ता आत्मघाती बांधका बिरुद्द अडिग भएर जनता उतार्ने ?
यहाँ त बर्सेन बाढिमा डुबेका र उद्दार गरिएका सेलिब्रेटी तस्बिरहरु बस्ने र सेलिब्रेटी बन्न खोज्नेहरुको भिड बाक्लिदो छ। उनिहरु अझै पनि कानेखुसीमै रमाउन ब्यस्त छन्नाकी जनताको चिच्याहट सुन्न। उनिहरु अझैपनी आफ्नै स्वार्थमा तल्लिन छन नाकी जनताको जिवनमरणको भयावह लाई हेर्ने र मनन गर्ने फुर्सद छ । चुनावी मैदानमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई करौडौ रकम बाड्न लगाउनेहरु राजनैतिक ब्यापारी/दलाल/र ठगहरु खोइ त देश डुबेको बेला कुन दुलोमा पसेका छन ? आफुलाई कथित राष्ट्रवादिको उपनाम भिराउन चाहने हरुका कार्यकर्ता हरुलाई मात्रै उतार्ने हो भने कोशी ब्यारेज मात्रै नभई हालसम्म भारतले लगाएका 11वटा ब्यारेजहरु हातैहातले भत्काउन सक्थे। एउटा गाउँपालिका प्रमुख जित्न पाँच करोड खर्च गर्नुपर्यो भन्नेहरु कुन दुलोमा छन तिनले कति वटा प्रमुख जिते कति वटा 5करोड खर्च गरे होलान ? एउटा 5करोड बाढी प्रभावितलाई दिने हिम्मत किन गरेनन ..?
हिजो देशको सार्बभौमसत्ता एक ठाउँमा बन्धक बनाएर आज आफ्नै कदमका बिरुद्द भाषणबाजी गर्ने ठूलो जमातले आफुलाई गाईको दुधले नुहाउने ठूलो प्रयत्न गरिरहेको छ। हो हामिलाई हाम्रा नजिकको प्रचारबाजिमा तल्लिन हुनु छ । त्यो पनि बिना योजना का प्रचारबाजिमा रमाउनु छ ।सस्ता प्रचारबाजिमा रमाउनुछ । तर आज यिनै दलालहरुको सिमित स्वार्थको कारण तराईबासिले जुन स्थिति भोगिरहेछन जनताले माफी गर्ने पक्कै छैनन। जुन दिन जनताको संबेदनसिलता भङ्ग हुन्छ जुन दिन जनताको मौनता भङ्ग हुन्छ त्यो दिन पक्कै कोशी,महाकाली,जस्ता राष्ट्र हित बिपरितका बांधहरुले तिम्रो शरीर पक्कै छेक्न सक्ने छैन । जनताहरुले तिमिलाई कोशी,महाकाली,कर्णालीका बांधहरुमा गुट्मुटाउने दिन पक्कै आउनेछ ।